Titans (2018) – Gold Channel Movies
ငယ်ငယ်က Cartoon Network ကနေ နေ့လည်တိုင်းလာတဲ့ Teen Titans ကို ၂၅ ဝန်းကျင်လောက် Superhero ပရိသတ်တွေဆိုရင် ကောင်းကောင်းသိကြမှာပါ။ Teen Titans အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Robin, Cyborg, Starfire, Raven နဲ့ Beast Boy တို့ကို Animation အနေနဲ့ တစ်ဝကြီး ကြည့်ရှုပြီးချိန်မှာတော့ 2018 ခုနှစ်မှာ ပရိသတ်တွေဆီကို Live Action အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
S1 အတွက် အကျဥ်းအနေနဲ့ကတော့ ဆယ်ကျော်သက်တွေမဟုတ်တော့တဲ့ Titans တွေဟာ တကွဲတပြားနဲ့ ဘဝကိုလျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ Titans တွေရယ်လို့လည်း မသိကြပါဘူး။ ကိုယ်စီကိုယ်စီ အစွမ်းတွေနဲ့ ပြသနာတွေဖြစ်ရာကနေ Raven တစ်ယောက်က Dick ဆီကိုရောက်လာပြီး ကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတော့တယ်။ အဲဒီကနေတစ်ဆင့် Starfire နဲ့ Beastboy တိုနဲ့ ဆုံပြီး Titans ရယ်လို့ဖြစ်လာကြပါတယ်။ နောက်မှာတော့ Raven ကို သူ့ရဲ့အဖေဖြစ်သူ Trigon က ပစ်မှတ်ထားပြီးတော့ ကမ္ဘာကြီးကို ကျွန်ပြုဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကို Titans တွေ သိသွားပြီးတော့ Superhero တို့ ထုံးစံအတိုင်း ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
TvSeries ဖြစ်တာနဲ့အညီ Character Development တွေကို သေချာမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Teen Titans Character တွေထဲမှာမှ Cyborg တစ်ယောက်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ ၄ ယောက်ကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ Season အနေနဲကတော့ လက်ရှိမှာ ၂ ခု ထွက်ရှိထားပြီးတော့ Origianl Member ၄ ယောက်အပြင်ကို Jason Todd, Troia, Hawk and Dove, Superboy တို့ အပြင်ကို Deathstrok ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ Rose Wilson ကိုပါ တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
Animation နဲ့ မတူတာကတော့ ငယ်ငယ်ကကြည့်ဖူးတဲ့ Teen Titans မှာဆိုရင် အရောင်အသွေးစုံပြီး ဟာသတွေအပြည့်နဲ့ ကြည့်ခဲ့ရပေမယ့် Titans series မှာတော့ Animation နဲ့မတူဘဲ DC တို့ထုံးစံအတိုင်း တော်တော်လေး Deep ပြီး Dark မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Season 1 &2Translated by Kaung Thant Win Htet, Beyond & Kyaw Myo Oo
Season3Translated by Bruce, Lynn Kha
EmiliaSeptember 18, 2021Reply
Season3က လင့်တွေ ပျက်နေပြီ
HadesJune 8, 2021Reply
Season 1 and2link update admin .
Khant kiMarch 15, 2021Reply
Season 1 link plz admin
thet kyaw tunSeptember 28, 2019Reply
KyawthihaSeptember 11, 2019Reply
B? B?September 8, 2019Reply